«LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR» :: Haharitra dimy andro ny tsenaben’ ny Noely sy ny faran’ny taona • AoRaha
«LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR» Haharitra dimy andro ny tsenaben’ ny Noely sy ny faran’ny taona
Andiany fahefatra sady farany amin’ity taona ity. Raikitra indray ny hetsika “La Grande Braderie de Madagascar”, izay hotontosaina etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina. Haharitra dimy andro ity tsenabe natokana ho an’ny fetin’ny Noely sy ny taom-baovao ity, izay hanomboka ny 20 hatramin’ny 24 desambra ho avy izao.
Tahaka ny mahazatra dia hisy hatrany ny fihenam-bidy 15% fara farahakeliny, amin’ireo entana amidy ao. Tranoheva miisa valopolo sy roanjato no hanome fahafaham-po ireo mpiantsena amin’ny karazana entana maro, toy ny kojakoja sy ny fitaovana fampiasa an-dakozia, fitafiana sy kiraro hoentina amin’ny fety, asa tanana vita Malagasy, haingon-trano, sakafo, hatramin’ny kojakoja fanaingoana fiara sy ny maro tsy voatanisa.
“Ho hentitra izahay amin’ny fanaraha-maso ny vidin’entana mba tena hihatra tokoa ilay fihenam-bidy mandritra io hetsika io”, hoy Andrianasolo Hery, tompon’andraikitry ny varotra eo anivon’ny Mada Vision, mpikarakara ny La Grande Braderie de Madagascar, omaly, raha nihaona tamin’ireompandray anjara teny Mahamasina.
“Raha nifarana alahady hatrany ny hetsika hatramin’izay, dia amin’ny alatsinainy 24desambra kosa izy vao hikatona amin’ity indray mitoraka ity”, hoy hatrany ny fanazavany.Hisy foana ny fanentanana samihafa sy ny kilalao ho an’ny ankizy mandritra io tsenaben’ny Noely sy ny faran’ny taona io. Ankoatra ireo entana amidy dia hanome tolotra miavaka ho an’ny mpanjifa ihany koa ny Master Immo sy ny Allo Taxin’àka, ary ny orinasa Salone, izay mpiara-miombon’antoka amin’izao hetsika izao.
FOTODRAFITRASA :: Hohatsaraina ny lalam-pirenena faha-9 sy faha-12A